Ungawashaja kanjani amathawula akho (w / 2 izithako osuvele unazo)! - Amathiphu Nemibono Emihle!
tater tot casserole ngemifino efriziwe
Ngingakwazi ukupheka ubhekeni lwe-turkey kuhhavini
isaladi le-taco elinama-chip corn corn
Ingabe uphaya kalamula i-meringue udinga ukufakwa esiqandisini
Ungawashaja kanjani amathawula akho (w / 2 izithako osuvele unazo)!
Ungawashaja kanjani kabusha amathawula akho ngezithako osuvele unazo ekhaya !! Lokhu kuzobashiya bethambile, abasha futhi bemunca kakhudlwana!
Ungashaja kabusha kanjani amathawula akho
Ngiyayithanda? Yinamathisele ukuyisindisa bese wabelana ngayo!
Landela Chitha namaPennies ku-Pinterest ukuthola ezinye izindlela ezinhle!
Uma unamathawula amasha sha anolaka futhi angafuni ukumunca ngendlela efanele, noma uma unamathawula amadala angavuli amanzi njengakuqala, musa ukuwalahla. Badinga nje ukuvuselelwa kancane.
Lokhu kusebenza kahle kakhulu ... futhi ungakhathazeki, ukusebenzisa uviniga akukwenzi amathawula akho anuke njengeviniga! Kubashiya bengenaphunga ngokuphelele.
Ungakhuphula ukusebenza kwamathawula akho ngezithako ezimbili ezilula: uviniga omhlophe nesoda yokubhaka.
TOP UKULAYISA WASHER: Faka amathawula akho esesheni, ungenayo insipho, bese uyigcwalisa ngamanzi ashisayo. Lapho nje i-washer igcwele, ngaphambi kokuqala komjikelezo wokuwasha, yeka inkomishi kaviniga. Vumela ukuthi ihlanjululwe isikhashana, bese ufaka uhhafu wenkomishi yesoda yokubhaka. Gijimisa isheringi, bese womile njengokujwayelekile. Amathawula akho azovuselelwa futhi afane namasha, noma abe ngcono kunanini ngaphambili! (Ungafaki isithambisi sendwangu).
NGAPHAMBILI UMTHwalo (HE) WASHER: Uma une-washer ye-HE (ngaphambili yokulayisha), beka amathawula akho ku-washer ne-1 inkomishi yesoda yokubhaka (ayikho i-detergent). Qala i-washer vumela amanzi agcwalise cishe umzuzu owodwa. Faka izinkomishi ezi-2 zikaviniga enkomishini ethi “ketshezi” (futhi awukho umuthi wokuwasha) bese uvumela umthwalo ukuthi udlule. Uma uzomisa, ungangezi isithambisi sendwangu.
Iseluleko sebhonasi : Gcina amathawula akho evuselelwe isikhathi eside ngokungalokothi usebenzise isithambisi sendwangu kuwo! (Amanye amathawula ami amadala bekufanele ngigijime kabili kepha lokhu kusebenza ngokumangalisayo !!)
Amathiphu amahle kakhulu lapha
Imithombo http://www.wikihow.com/Make-New-Towels-More-Absorbent http://lifehacker.com/5362234/use-vinegar-and-baking-soda-to-recharge-your-towels